घरमै बसेर यसरी हुन्छ फेसबुकबाट आम्दानी – Satyapati
काठमाडौं । फेसबुक विश्वमा सबैभन्दा बढी रूचाइएको सोसल साइट हो । नेपालमा पनि फेसबुक नचलाउने सायदै होलान् । धेरै मानिसहरूलाई फेसबुकबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी नहुँन सक्छ । आज हामी तपाईलाईं यस आर्टिकलमार्फत फेसबुक पेजबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिदैंछौं ।
फेसबुकमार्फत कसरी पैसा कमाइन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी हुँदैन । प्रायः यसका प्रयोगकर्ताहरूले दिनमा एक पटक फेसबुक खोलेकै हुन्छन् । त्यसैले आफ्नो व्यापार व्यवसाय र उत्पादनको बारेमा विश्वलाई जानकारी दिन फेसबुक सजिलो माध्यम बनेको छ । साना होस् वा ठूला सबै खाले व्यवसायहरूले आजभोलि फेसबुकमा आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन गरी प्रचार गरिरहेका हुन्छन् ।
फेसबुकमा तपाईँ हामीले लाइक नगेरको पेजबाट स्पोन्सर भनेर देखिने पोस्टहरू नै विज्ञापन हुन् । जुन फेसबुकलाई पैसा तिरेपछि मात्र त्यसरी देखिन्छन् । यस्ता पोस्ट नै फेसबुकको मुख्य आम्दानीको श्रोत हो । तपाईँ फेसबुकको अडियन्स नेटवर्कमा सहभागी भई काम गर्नुहुन्छ भने सिधै फेसबुकले नै यसका विज्ञापनदाताबाट आएको पैसाको केही प्रतिशत पैसा दिन्छ । यहाँ तपाईंलाई कसरी यसबाट पैसा कमाउने बारेमा जानकारी दिइएको छ ।
१. आफ्नो फेसबुक पेज खोल्नुहोस् र त्यसमा पब्लिशिङ्ग टुलमा जानुहोस् जुन तपाईंको पेजको साइडमा देख्न सक्नुहन्छ वा सिधैं फेसबुक क्रियटर्स स्टुडियोमा जानुहोस । त्यसपछि तपाईंको सामु तपाईं एडमिन भएका पेजहरू देखिन्छन् । तपाईंले कुन पेजमा इन्टान्ट आर्टिकल एप्रुभ गराउने हो त्यस पेजलाई छान्नुहोस् ।
२. अब तपाईंको सामु बिभिन्न विकल्पहरू देखा पर्छन् । जस्तै तपाईंले फेसबुकको पोलिसहरू पढेर कन्फर्म गर्नुहोस् । पोलिसी र भएका सबै एग्रिमेन्टहरू कन्फर्म गरेपछि बाँकी रहेका अरू अप्सनहरू जस्तै साइट लिङ्क राख्नुहोस् ।
३. रिभ्युका लागि तपाईंका साइटका १० ओटा आर्टिकल हुनुपर्ने हुन्छ र यी आर्टिकलहरू कतैबाट कपि भएको हुनुहुँदैन भने आर्टिकल करिब ३०० भन्दा बढी शब्दको हुनुपर्छ ।
४. अब तपाईंले कमाउनु भएको पैसा प्राप्तिका लागि बैंक विवरण भर्नुहोस् ।
अब आफ्नो साइट र पेज फेसबुक रिभ्युका लागि फेसबुक टिमलाई पठाउनुहोस् हाल कोभिड–१९ का कारणले गर्दा केहि हप्तापछि फेसबुकले एप्रभ भएनभएको सोही ड्यासबार्डमा जानकारी दिनेछ । याद राख्नुहोस् तपाईंको साइटमा एक महिनामा १५ हजारभन्दा माथि फेसबुकबाट ट्राफिक गएको हुनुपर्दछ अन्यथा फेसबुकले तपाईंको साइडलाई मिनिमल रिडरसिपमा राख्नेछ । यसरी तपाईंले सामान्य तरिकाले घरबाटै केही मेहनत गरेर फेसबुकबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ ।
धार्मिकस्थलमाथि राजनीति गर्नु कति उचित ?
शनिबार साँझसम्म बर्षा, पहिरो जानसक्ने चेतावनी
३२ मुद्दाले धानेको अख्तियारको जागिर ! ठूला मुद्दा प्रतिवेदनमै सीमित, शंकाको घेरामा सधैं ‘साना माछा’
बेतन कर्णाली हाइड्रो : नविल र नेपाल एसबिआई बैंकसँग ऋण व्यवस्थापन सम्झौता